ပုံမှန်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုလုပ်တာကြောင့် ဘယ်လိုအကျိုးထူးတွေရနိုင်မှာလဲ....... - Hello Sayarwon
အခြေခံကျန်းမာရေး » ဆေးစစ်ချက်များ
ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုလုပ်တာက ပိုက်ဆံအပိုကုန်တဲ့ကိစ္စလို့တွေးနေတယ်ဆိုရင် အခုကစပြီး ဒီအတွေးကိုဖျောက်လိုက်တော့နော်။ ပုံမှန်ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှုက လူတိုင်းလုပ်သင့်တဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေထဲက တစ်ခုမို့ပါ။ ဘာကြောင့် ဒီလိုပြောရလဲဆိုတာကို ဒီဆောင်းပါးလေးထဲမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံရှင်းပြထားလို့ ဖတ်ကြည့်ဖို့ပြောပါရစေနော်။
ရောဂါတစ်ခုခုဖြစ်ပြီဆိုရင်ငွေကနောက်ကမည်းလိုက်ရပြီဆိုတာထွေထွေထူးထူးပြောနေစရာမလိုအောင် လူတိုင်းသိထားပြီးဖြစ်မှာပါ။ တကယ်လို့ ပုံမှန်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်လာမယ့်ရောဂါတွေကို ထိထိရောက်ရောက်ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်တာကြောင့် ကျန်းမာရေးစရိတ်ကို တော်တော်လေးလျှော့ချနိုင်မှာပါ။နောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခုကစောစောသိစောစောကုသမှုခံယူနိုင်တာကြောင့်ရောဂါခံစားရမှုသက်သာစေနိုင်မှာပါ။
ပုံမှန်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုကြောင့်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ရောဂါတွေကို ကြိုတင်သိရှိပြီး ကြိုတင်ကာကွယ်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကြိုတင်ကာကွယ်ခွင့်ရတာက ကျန်းမာရေးအတွက်တင်အထောက်အကူပြုတာမဟုတ်ဘဲငွေကုန်ကြေးကျသက်သာစသေလို စိတ်သက်သာရလည်းရစေနိုင်ပါတယ်။ရောဂါကို ကုသရာမှာလည်း ပိုမိုလွယ်ကူစေနိုင်ပါတယ်။
ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုလုပ်တဲ့အခါသွေးစစ်ဆေးမှုက မဖြစ်မနေလုပ်ရပါတယ်။ ဒီလိုသွေးစစ်ဆေးမှုကြောင့်လည်းရောဂါတော်တော်များများကိုသိရှိနိုင်မှာပါ။ အကြောင်းကတော့သွေးစစ်ဆေးမှုလုပ်တဲ့အခါသွေးတွင်းကိုလက်စထရောပမာဏကိုသိရှိနိုင်မယ်၊ ဆီးချိုရှိနေလား၊ ကင်ဆာ၊သွေးတိုး၊သွေးအားနည်းရောဂါ၊HIV/AIDS ရှိနေလား၊ နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါတွေရှိနေလားဆိုတာကို သိနိုင်သလို အသည်း၊ကျောက်ကပ်၊ သိုင်းရွိုက်တွေပုံမှန်အလုပ်လုပ်ရဲ့လားဆိုတာကိုလည်း သိနိုင်မှာပါ။ လိုအပ်တဲ့ ကုသမှုခံယူနိုင်သလိုပြင်ဆင်သင့်တဲ့ ကာကွယ်မှုအတွက်လည်း အသင့်ပြင်ထားနိုင်မှာပါ။
ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုကနေတဆင့် ဆင်ခြင်နေထိုင်ရမယ့် အချက်တွေကို သိရှိပြီး လိုက်နာနေထိုင်မှုတွေကြောင့် ကျန်းမာတဲ့ စားသောက်မှုပုံစံအပြင်နေ့စဉ်ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာကစလို့ ကျန်းမာတဲ့လူနေမှုပုံစံကို ဖန်တီးနိုင်မှာပါ။
တစ်နှ်စ်တစ်ခါထိုးရမယ့် ကာကွယ်ဆေးတွေကိုလည်း မမေ့မလျော့ထိုးဖြစ်နိုင်မှာပါ။ တုပ်ကွေးရာသီရောက်လာချိန်မှာ တုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေးမထိုးမိတာမျိုးဖြစ်နိုင်တဲ့ပြဿနာကိုကင်းစေနိုင်သလို ဆရာဝန်ကလိုအပ်တာကြောင့် ညွှန်ကြားလာမယ့် ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်ဆေးတွေကိုလည်း ပုံမှန်ထိုးဖြစ်မှာပါ။
ရှိသင့်တဲ့ BMI (ခန္ဓါကိုယ်ထုထည်ညွှန်းကိန်း) ထက်နည်းနေတဲ့သူတွေ
အသက်အရွယ်အလိုက် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုခံယူရမယ့် အကြိမ်ရေလည်း ကွာခြားနိုင်ပါတယ်။
အသက် ၁၉ နှစ်ကနေ ၂၁ နှစ်အထိ ၂ နှစ် တစ်ကြိမ် ဒါမှမဟုတ် ၃ နှစ်တစ်ကြိမ်
အသက် ၂၂ နှစ်ကနေ ၆၄ နှစ်အထိ ၁ နှစ် တစ်ကြိမ် ဒါမှမဟုတ် ၃ နှစ်တစ်ကြိမ်
အသက် ၆၅ နှစ်အထက် တစ်နှစ်ကို တစ်ကြိမ်ပုံမှန်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုလုပ်သင့်ပါတယ်။
ကျန်းမာခြင်းသည် လာဘ်တစ်ပါးဆိုတဲ့စကားအတိုင်း စိတ်ရောကိုယ်ပါကျန်းမာစွာနေထိုင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ လိုအပ်တဲ့ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုတွေကို အခုကစလုပ်လို့ ကိုယ်တိုင်အတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုက်ပါလို့ တိုက်တွန်းပါရစေနော်။
မွေးစကနေ ကျောင်းနေရွယ်ကလေးတွေကို အသက်အရွယ်အလိုက် ဖုန်းသုံး ချိန် ကန့်သတ်သင့်ပါတယ်။ ကလေးအသက်အရွယ်အလိုက် Screen time သတ်မှတ်ချက်ဆိုတာ ရှိပါတယ်။
မတ်တတ်ပြေးအရွယ် နဲ့ မူကြိုအရွယ်, မတ်တတ်ပြေးအရွယ်နဲ့မူကြိုအရွယ်ကလေးရဲ့ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှု, ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း စက်တင်ဘာ 16, 2021 .2mins read
ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေးတွေ ကြားက ကွာခြားချက်များ ........ ဘယ်ကာကွယ်ဆေးက ပိုကောင်းလဲ ဆိုပြီး ရွေးရမခက်ရအောင် ကာကွယ်ဆေးတွေရဲ့
ကူးစက်ရောဂါများ, ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် စက်တင်ဘာ 16, 2021 .3mins read
ဆီးချိုရောဂါရှိတဲ့သူတွေက ဘာကြောင့် သူများတွေထက် ပိုးဝင်လွယ် ၊ အနာဖြစ်လွယ် နေရတာလဲ။ ဘယ်လို ရောဂါပိုးတွေ ဝင်နိုင်သလဲ။ ဘယ်လို ကာကွယ်ကြမလဲ။
ဆီးချို သွေးချို, ဆီးချိုရောဂါ နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာများ စက်တင်ဘာ 15, 2021 .3mins read
ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး နဲ့ ဆီးချို...... ဆီးချို ခံစားနေရသူတွေအတွက် ကိုဗစ်ကို ကာကွယ်နိုင်မယ့် အကောင်းဆုံးသော နည်းလမ်းက ကာကွယ်ဆေး ထိုးတာပါ။
ကူးစက်ရောဂါများ, ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် စက်တင်ဘာ 14, 2021 .2mins read